MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA NOOCYADA EY SHARP - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Noocyada Ey Sharp
Eeyaha / Shar-Pei eeyaha isku dhafan ee isku dhafan
'Isku darka Shar Pei Beagle waa eey 1 1/2 sano jir ah, culeyskiisuna waa 35 rodol. Hooyadeed waa Beagle saafi ah aabeheedna waa daahir Shar Pei. Waxay leedahay dabeecad weyn gaar ahaan carruurta. Meel kasta oo aan u qaadno, waxay soo jiidataa fiiro badan, qof walbaa wuxuu rabaa inuu ogaado nooca ay tahay dadkuna way la yaabaan markay ogaadaan inay tahay Shar Pei Beagle mix. Waxay leedahay dhogor aad u jilicsan oo leh daadinta ugu yar. Waxay jeceshahay inay banaanka joogto iyo meelkasta oo aad joogto. Tani waa iskudhaf weyn maxaa yeelay Shar Pei iyo Beagle midba midka kale wuu isku dheelitiraa. Ma lihin dhibaatooyinka maqaarka ee 'Sharb Pei purebred' iyadu uma cabaaddo sida Bahalka oo kale. Anaga iyada ku soco ugu yaraan 1 mayl maalintii oo waa inay ku jirtaa xadhig ama dabagaley ama cirifka ugu horeeya ee ku dhaca ayaa u diri doona iyada oo ceyrsaneysa iyada. Waxay ku socotaa iyadoo sankeedu dhulka u dhacayo sida Gorgorku u socdo. Waxay umuuqataa inay ciyeyso oo keliya marka qof albaabka yimaado oo uu istaago mar ay ogaato inay wax walba hagaagsan yihiin ama markay aragto baqshiish ama chipmunk oo dhinac maraya iyada oo banaanka joogta.
Gorgorka Sharp ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Gorgor iyo Shar-pei . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay taranka iskutallaabno jiil badan .
Lilly the Sharp Eagle oo ah cunug 6-toddobaad jir ah— Waxaan soo qaatay eeygayga Lilly markay ahayd kaliya 6 toddobaad. Iyadu waa gabadha ugu macaan badan! Waxay si dhakhso leh u tababartay kahor intaysan xitaa 9 toddobaad gaarin. Waxay gabi ahaanba leedahay sanka Beagle oo cabaada, oo aan jeclahay. Sawirkani waa maalintii aan korsaday iyada.
'Lacag ka bixi Eygaa' Sharp Eagle ee 19 toddobaad — Lacagta aabihiis waa 16-inch Beagle, hooyadiisna waa Shar Pei madow madow. Waxa uu leeyahay muuqaal ah Gorgor leh laalaab. Lacag jecel yahay in la calaaliyo , gaar ahaan ulaha. Waa eey aad u jiifay, waqtigiisa intiisa badanna hurdo. Markuu soo jeedo, wuxuu ku ordayaa agagaarka bisadeena. Wuxuu leeyahay dabeecad aad u jilicsan, dabeecad dabacsan oo raba inuu saaxiib la noqdo qof walba iyo wax walba. '
eeyo maltese madow oo iib ah
Lacag sii $ Sharp Eagle eey toddobaadyada 14
Lacag ku bixi Eeyga 'Sharp Eagle' ee 9 usbuuc
'Stewart waa 1/2 Shar-Pei iyo 1/2 Beagle. Wuxuu ahaa eeygii ugu quruxda badnaa abidkiis oo leh laalaabasho, dabo duuban iyo indho cagaaran !! Wuxuu ka yimid suuqa beeraleyda PA mana aanan tagi karin la’aantiis! Wuxuu ahaa mid aad u xanaaq badan sida eey, laakiin wuxuu ku koray boqortooyo, wiil qurux badan oo macaan. Wuxuu jecel yahay beerta jilifta iyo la ciyaarista eeyaha kale. Wuxuu la jaan qaadayaa xayawaanka oo dhan oo ay ka mid yihiin bisaduhu !! Isagu waa wiil hooyo ah oo leick dhunkasho ka buuxo !! Xitaa wuxuu kugu dhejinayaa gacmihiisa si aad 'habsiiso'. Quruxda Shar Pei oo leh dabeecad macaan ee Gorgor. Isagu waa eey reer ah oo cajiib ah, daacad ah !! '
Stewart Sharp Eagle sida eey ku qubeysato qubeyska
Stewart Sharp Eagle sida eey
Snickers waxay ka timaaddaa lab Shar Pei iyo dheddigga Beagle, oo lagu muujiyey halkan markay tahay 9 bilood jir
Shar-Pei / Beagle waxay isku dhaleen eeyo yaryar Sasha iyo Sadie
'Tani waa Duke oo jira 6 bilood. Isagu waa lab Shar Pei / Beagle mix puppy. Isagu waa eey aad u qaabaysan. Isagu had iyo jeer wuu faraxsan yahay oo wuxuu jecel yahay inuu ku ciyaaro alaabtiisa, gaar ahaan caruusadaha uu ku ciyaaro - iyagu waa kuwa uu jecel yahay. Wuxuu jecel yahay alaabada lagu ciyaaro ee qaylada, sidoo kale. Waqti badan kuma qaadan inuu tababbar dheriga sameeyo ama barto sida loo fariisto. Caadadiisa ugu xun waxay ahayd inuu qaato go'yaal qalajiyaha oo ka soo dhacaya dharka oo ku calalinaya. '
Eeg tusaalooyin badan oo ka mid ah 'Sharp Eagle'
Sawirro Gorgor Sharp
pitbull puppy 9 toddobaad jir
chihuahua iyo yorkie eyda isku qasan
images of spaniels Springer ingiriisiga
shich miniuzer iyo shih tzu mix
Jack CORGI Russell isku darka dabeecad